Melsjön | Hultsfred သို့သွားပါ
နေအိမ် » ကြည့်ရှုပြီးလုပ်ပါ » လှုပ်ရှားမှုများ » ငါး » Melsjön
3. Lake Melsjönအတွက်ငါးဖမ်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဝယ်ပါ
Melsjönသည်ရေတိမ်ပိုင်းငယ်ဖြစ်ပြီးရေသည်Gårdvedaån၏ကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းသည်Målillaအနောက်ဘက် Flaten ရေကန်၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး Flaten ၏ FVO ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုရေကန်သည်ရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးအရွက်ကျူပင်များနှင့်ကျူပင်များဖြင့်ထူထပ်သောကျူပင်များပါသောရေကန်ချိုင့်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ထင်းရှူးပင်များသည်သဲမြေပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးသည်၊ တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်မူ pors နှင့်မိုးမခပင်များကြီးထွားလာပြီးမြေဆီလွှာသည်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ကမ်းခြေများပြားသောကြောင့်မြေသည်ရေဒီယိုများမကြာခဏရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ရေကန်တွင်ငါးများကိုအကျိုးပြုသည်။
Sivert Blom၊ Blixerum
Hans နှင့် Teresia Edvinsson, Ingelstorp
ဇန်နဝါရီ - ခန်းမ
အစပြုသူ: ရေကန်တွင်အမျိုးမျိုးရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ငါးမျှားရန်ငါးဖမ်းခြင်း။
စတင်တည်ထောင်သူ - ရေခဲမီတာသည်နမူနာမီတာကဲ့သို့ပင်စူးစမ်းရန်များစွာရှိသည်
ငါးဖမ်းခြင်းသည်လှေမှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်လည်းကောင်းသောကျင်းများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ပိုက်နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းအိုင်ပတ်လည်ကျူပင်အနားအပြင်ဘက်မှာနေချင်တယ်။ သစ်ပင်အနီးရှိငါးများကိုလှည့်ပတ်ရန်ထိရောက်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်ရေခဲရေနှင့်ဝက်ခြံများသည်ရေကန်တစ်ခုလုံးတွင်ကောင်းမွန်သည်။ ပိုက်နှင့်ငါးကြင်းတို့သည်မြစ်ဝများတစ်လျှောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ငွေ၊ ရွှေ၊ အနီရောင်၊ အဖြူနှင့်အဝါရောင်ရှိအမွေးအတောင်များရှိယင်ကောင်ကြီးများသည်များသောအားဖြင့်ကောင်းသည်။ ပိုက်၏သွားများသည်မျဉ်းကြောင်းကိုမပွတ်သပ်နိုင်ရန်အတွက်ယင်ကောင်၏အဆုံးတွင်ပိုထူသောပေါင်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ Sarv ကိုရေတိမ်ပိုင်းနှင့်အသီးအရွက်များပေါများသောareasရိယာများရှိလှေတစ်စင်းမှထောင့်ချိုးဖြင့်ပြောင်းဖူးသို့မဟုတ်ပိုးကောင်များကိုငါးစာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Flat ငါးဖမ်းခြင်း။ အသင်းအပင်းအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ Fiske ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Flaten.
Sivert Blom, Blixerum 0383-73 30 ရက် 23
Melsjön၊ 570 82 မာလီလာ, ဆွီဒင်
4 ထဲက 5.0
Google တွင် 1 ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ
4/5 လွန်ခဲ့သော2နှစ်က
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုများအတွက် Google Maps သည်ဖွင့်ရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။